Ny fizarana tsenan'ny dia dia hitohy hihena hatramin'ny 2023
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny fizarana tsenan'ny dia dia hitohy hihena hatramin'ny 2023
Ny fangatahana kamo amin'ny fitsangatsanganana any ivelany any Etazonia dia hitazomana ny fironan'ny firenena ao ambadiky ny fitomboan'ny dia iraisam-pirenena manerantany, araka ny vinavinan'ny US Travel Association.
Raha vinavinaina hitombo salan'isa 4.8% isan-taona hatramin'ny taona 2023 ny dia lavitra manerantany, ny vinan'ny fitomboan'i Etazonia dia vinavinaina ho antsasaky ny tarehimarika ihany - 2.4%.
Io elanelana io dia hampihena ny anjaran'i Etazonia amin'ny tsena fitetezam-paritra lavitra ka hatramin'ny 10.4% amin'ny 2023 - manohy ny fihenan'ny fiakarana hatramin'ny haavony 13.7% teo aloha tamin'ny 2015.
Ny fihenan'ny anjaràn'ny tsena 2019-2023 dia mety hamoizana ny harinkarena amerikanina mitentina $ 78 miliara fanampiny amin'ny fandaniana amin'ny mpitsidika sy asa amerikana 130,000. Vokatry ny fihenam-bidy nanomboka tamin'ny haavo 2015, dia efa namoy ny asa $ 59 miliara sy 120,000 ny toekarena tamin'ny taona 2018.
"Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko iraisampirenena dia ny fanondranana laharana 2 an'i Etazonia, ary ny fanaovana ny diany fitomboana ho laharam-pahamehana ho an'ny firenena dia mety ho mpanamboatra tsy fitoviana amin'ny fanampiana ny firenena tsy ho resin'ny resa-be", hoy ny filoham-pirenena sy ny CEO an'ny ASA Travel Roger Dow. "Amin'izao fotoana izao, ny firenena dia tsy misambotra ny fahafaha-manao toekarena feno amin'ny dia an-dranomasina, saingy misy ny vahaolana politika famahan-toerana izay afaka manampy amin'ny famahana izany - manomboka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana nomen'ny kongresy ny fikambanana marketing amerikana Brand USA."
Araka ny nanamarihana tamin'ity herinandro ity tao amin'ny Wall Street Journal, ny sehatry ny fanondranana serivisy serivisy amerikana - tarihan'ny dia - dia miatrika fihenam-bidy lehibe eo amin'ny tontolon'ny toekarena manerantany.
Ny ahiahy mitovy amin'izany dia vinavinaina amin'ny fitomboana malemilemy amin'ny tsena fitsangatsanganana an-trano matanjaka matetika, izay hitombo 1.4% fotsiny ny vinavinan'ny tatitra momba ny fitsangatsanganana amerikana tamin'ny taona 2020, ny fihenam-bidy haingana indrindra tao anatin'ny efa-taona - vao maika niteraka tahotra ny fihemoran'ny toekarena ary nanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fanamafisana ny lafiny iraisam-pirenena.
Tohanan'ny maodely ara-bola tsy manam-paharoa izay tsy mandoa vola akory ny mpandoa hetra amerikanina, Brand USA dia programa lehibe iantohana ny fiantohana ny fifaninanana US amin'ny dolara iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany sy ny tombony azo avy amin'ny toekarena - miaraka amin'ireo mpifaninana aminy iraisam-pirenena miankina amin'ny minisitera fizahan-tany madiodio ary misy mpamory hetra. Tapitra ny taona ity masoivoho ity raha tsy misy ny hetsika avy hatrany ataon'ny Kaongresy.
Ny ezaka ara-barotra nataon'i Brand USA tao anatin'ny enin-taona lasa dia nitondra mpitsidika mitombo 6.6 tapitrisa tany Etazonia, ka niteraka 47.7 miliara dolara ny fiantraikany ara-toekarena ary nanohana asa amerikana efa ho 52,000 isan-taona.